"प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने बेला हो यो। उहाँलाई सही सल्लाह र साथ दिने बेला हो। काम राम्रो भए जनता आफैले बनाउने छन् भिडियो। नत्र पार्टीले बनाउला" - काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा -
“प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने बेला हो यो। उहाँलाई सही सल्लाह र साथ दिने बेला हो। काम राम्रो भए जनता आफैले बनाउने छन् भिडियो। नत्र पार्टीले बनाउला” – काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा
२०७८, २२ श्रावण शुक्रबार ०१:३७ August 6, 2021 clickonLeaveaComment on “प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने बेला हो यो। उहाँलाई सही सल्लाह र साथ दिने बेला हो। काम राम्रो भए जनता आफैले बनाउने छन् भिडियो। नत्र पार्टीले बनाउला” – काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं – आज सामाजिक संजाल भरी काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लाई लिएर बनाईेको भिडिओ सम्बंधी सर्बत्र चर्चा भयीरहेको बेला काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनी उकत् भिडिओलाई लिएर आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेका छन।
मलाइ शेरबहादुर देउवा मन पर्छ किनभने…
उहा २४ घन्टा देश पाटि आफ्नो सस्था लाइ राम्रो गर्ने पिल्ज गर्ने भनेर दत्त चित्त भएर काम गर्ने हुन्छ !! pic.twitter.com/1vzcgAfhou
— Sher Bahadur Deuba Fan (@SherBDeubaFan) August 4, 2021
‘मलाई शेरबहादुर मनपर्छ किनभने …’ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लाई लिएर बनाईेको भिडिओ लाई देउवाको सचिवलायले सार्वजनिक गरिरहेको छ। हालसम्म देउवाको सचिवलायबाट यसप्रकारका तीनवटा भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन्।
सोही भिडिओको विषयमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् र अहिलेको समय काम गर्ने हो भनेका छन। साथै उनले काम राम्रो भए जनता आफैले भिडियो बनाउने छन् भनेर लेखेका छन ।
प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने बेला हो यो l उहाँलाई सहि सल्लाह र साथ दिने बेला हो l काम राम्रो भए जनता आफैले बनाउने छन्- `भिडियो´,
नत्र पार्टीले बनाउला !
पहिले फुल रोपौं, गोडमेल राम्रो गरौं, सुवास प्रकृतिले पछि फैलाउँछ l `प्रधानमन्त्रीको सचिवालय´को ध्यानाकर्षण गराएको छु l जय नेपाल !
आफ्नो सामाजिक संजाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने बेला हो यो। उहाँलाई सही सल्लाह र साथ दिने बेला हो। काम राम्रो भए जनता आफैले बनाउने छन् भिडियो। नत्र पार्टीले बनाउला। पहिले फुल रोपौं, गोडमेल राम्रो गरौं, सुवास प्रकृतिले पछि फैलाउँछ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएको छु। जय नेपाल !’
जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती किन? – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा
अर्जेन्टिनियन फुटबल सुपरस्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीको बार्सिलोनासँगको लामो सम्बन्ध समाप्त
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ढिलाईमा सर्वोच्चले कारण मागेन
२०७५, २४ जेष्ठ बिहीबार १७:२४ June 7, 2018 clickon
प्रचण्ड निवासमा प्रधानमन्त्री ओली
२०७७, ४ पुष शनिबार १३:०२ December 19, 2020 clickon
२०७८, ३१ जेष्ठ सोमबार ०८:०४ June 14, 2021 clickon